I-Youtube ngoku ikuvumela ukuba uhambise ividiyo phambili okanye ubuye ngasemva nje | Iindaba zeGajethi
I-YouTube ngoku ikuvumela ukuba uhambise ividiyo phambili okanye ubuye kwangoko
Ukuba ungumsebenzisi we-Android kwaye uhlala usebenzisa usetyenziso Youtube Ndiqinisekile ukuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye uya kuba, ngasizathu sithile okanye esinye, ukuqhubela phambili okanye ukubuyisela umva ividiyo obukade uyibukele, umsebenzi okhawulezileyo ukuba inkqubela phambili oyifunayo inde kodwa inokuba yintloko yokwenyani ukuba kufuneka uye phambili okanye ubuyele umva imizuzwana eli-10 okanye engama-20, ngakumbi ukuba ividiyo inde kakhulu.
Ngokufika kwenguqulelo entsha v11.47.55, Abasebenzisi be-Android, okwangoku, njengoko bephawula Police Police, Bazokwazi ukuqhubela phambili okanye ukubuyela umva ekuveliseni ividiyo yabo imizuzwana eli-10 ngokuthepha kabini kwicala lasekunene okanye lasekhohlo lesikrini, kuxhomekeke kwisenzo abafuna ukusenza. Ngaphandle kwamathandabuzo ukongezwa ngokubhekisele ekusebenzeni abasebenzisi abaninzi abaya kukuxabisa kakhulu.
Phambili okanye ubuyisele umva ividiyo ye-YouTube ngokuthepha kabini kwiscreen.
Ukuba unomdla wokuba ube nokukhetha ngokukhawuleza, xelela ukuba ukuze uyisebenzise kufuneka Cacisa yonke idatha yosetyenziso. Ngenxa yoku kufuneka uhambe kwiZicelo, ukufikelela kwiYouTube, ukuGcina kwaye ucofe kuCacisa idatha kwaye ulungile. Ngale nyathelo, lonke useto kunye nayo nayiphi na ividiyo oyikhuphelileyo iya kulahleka. Emva kokwenza lo msebenzi, ukucofa kabini kwiscreen kuya kusebenza kwaye uya kuba nakho ukuqhubela phambili okanye ukubuyela emva imizuzwana eyi-10 ngokucocekileyo ngokuchukumisa isikrini sakho kabini ngokulandelelana.
Njengeenkcukacha zokugqibela, xelela ukuba, njengoko kuxoxwa kwiiforamu ezahlukileyo, ngoku kwaye okwangoku ayinguye wonke umntu osebenza ngobuqhetseba ungalahl 'ithemba ukuba awukwazi ukuwenza kuba ngumsebenzi nje omtsha ukuba abafana abavela kuGoogle banoxanduva Ukuphuhliswa kwesicelo se-Android kuyavavanywa. Njengesincomo sokukukhumbuza ukuba, ngaphambi kokwenza naluphi na utshintsho, Qiniseka ukuba unenguqulo ye-11.47.55 Ukusuka kwisicelo seYouTube.
Más información: Police Police
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-YouTube ngoku ikuvumela ukuba uhambise ividiyo phambili okanye ubuye kwangoko
I-Apple ayizukukwazi ukubuyisela iiterminal ezintsha zeDenmark
Amaxabiso anokubakho eNokia entsha ahluziwe